We.com.mm - ညီမငယ်စိမ့်ထက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်ရှာတွေ့ပြီ
ညီမငယ်စိမ့်ထက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်ရှာတွေ့ပြီ
ဒီသတင်းကိုတော့ #Justice for Saint Htet ဆိုတဲ့ non-profit facebook campaign page က တင်ထားခဲ့တာပါ။ သတင်းမှန်ဖြစ်ကြောင်း ၁၀၀% အတည်ပြုလို့ရပါတယ်။ page ကနေ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး မူရင်းအရေးအသားအတိုင်းပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ညီမငယ်စိမ့်ထက်ရဲ့ အသက်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း မိသားစုမှ အတည်ပြုလာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ခြေလျင်နှင့် တောင်တက်အဖွဲ့ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးကျင်ဦး ခေါင်းဆောင်သည့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဟာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး ခရီးစဉ်ကို မကြာမီရက်ပိုင်းက မိသားစုနှင့်တိုင်ပင်၍ ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး၊ မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှာတော့ ညီမငယ်စိမ့်ထက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကို ညီမငယ်ရဲ့ မိသားစုမှ အတည်ပြုပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ကြိုတင်သတင်းပေးချက်အရ ညီမငယ်စိမ့်ထက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ရေခဲလွတ်ရာနေရာအထိ ပြုတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်၊ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ စတင်ပုပ်ပွနေခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ညီမငယ်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အား ရန်ကုန်အထိသယ်ယူဖို့ မလွယ်ကူတော့ပဲ၊ ပူတာအို ရင်ခွဲရုံသို့ အရင်ပို့ဆောင်စစ်ဆေးပြီး၊ ပူတာအိုမြို့မှာပင် မီးသဂြိုၤလ်ပေးကြဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ညီမငယ်စိမ့်ထက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်သယ်ဆောင်ပေးလာနေတဲ့အဖွဲ့ဟာ၊ လောလောဆယ်မှာ အပြန်လမ်းခရီးမှာပဲ ရှိနေသေးပြီး၊ မကြာခင်မှာ ပူတာအိုမြို့သို့ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ညီမငယ်ရဲ့ မိသားစုဝင်များကလဲ ပူတာအိုနေ၍မှ စောင့်စိုင်းနေကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ဒီသတင်းကတော့ လောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ အတည်ပြုပေးနိုင်သလောက်အထိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ အချို့အချက်အလက်တွေကိုတော့ မတင်ပြသေးပဲ တတ်နိုင်သလောက် ဆိုင်းငံ့ထားပါတယ်။
ညီမငယ်စိမ့်ထက် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ညီမကိုချစ်ခင်စာနာတဲ့ အများပြည်သူနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ ?
Her body has been found decomposed. The rescue team is now still on the way carrying the body back to the town Putao, and is expected to arrive either today or tomorrow. Her family is planning to send her body to the hospital for the autopsy and such processes. After which would be the funeral by burial or cremation, most likely to be at Putao town since the body is now not in the condition of bringing back to her home town, Yangon.
Our deepest condolences to her and her family. We're all here extending our most heartfelt sympathy. We will be praying best for her to rest in peace. And will all be continue supporting for the justice.
Credit - Justice for Saint Htet facebook page
ရန်ကုန်၊နေပြည်တော်နှင့်မန္တလေးအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံရှိမြို့ကြီးများတွင် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမေရိကန်သံရုံးမှ ထုတ်ပြန်
လက်ထပ်ချိန်လည်းတူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်လည်းတူတဲ့ အမွှာစုံတွဲနှစ်တွဲ